Malunga nathi -Fuzhou Huaguang Colour Printing Co., Ltd.
I-Fuzhou Huaguang Printing Colour Co, Ltd.yiprinta yokushicilela kunye nomzi mveliso wokupakisha onamava eminyaka engama-20. Ngokukhethekileyo kumgangatho ophezulu wokuvelisa ileyibheli yesitikha, ibhokisi yesipho, ibhokisi yokugcina iphepha, ibhokisi yePVC, iphepha lephepha.silapha ukunceda nantoni na eyiliweyo ukuya kwinkxaso yobuchwephesha.
Le nkampani yinkampani yabucala enamatyala athile, ikakhulu kumashishini asezantsi aphakathi kunye nendawo zokuvelisa kunye neYurophu, iMelika, amashishini okuthenga aseJapan e-China njengabaxhasi abaxhasayo nabasekiweyo.
Inkampani izinikele kuyilo kunye nasekwenzeni zonke iintlobo zeelebheli eziphakathi neziphezulu (kubandakanya neelebheli ezichasayo), ii-CARDS zokuchonga (kubandakanya ii-CARDS zeplastikhi), iibhokisi zombala, iibhokisi zezipho ezinoqweqwe oluqinileyo, iibhokisi zokugcina, iibhegi.
Ukuze kuqinisekiswe ixesha elifanelekileyo kunye nokuchaneka kokubonelelwa kwempahla kubathengi, inkampani ityale imali kakhulu kwiitalente nakwizixhobo, igxile kuphando lwenkqubo kunye nophuhliso, kulawulo lomgangatho, nasekusebenziseni inkqubo yolawulo lwemveli kunye nenkqubo yokuvelisa. Ukumilisela imveliso ecwangcisiweyo kunye nesitokhwe sokhuseleko esicwangcisiweyo, ukuqinisekisa ukubonelela ngeenkonzo zokuhambisa ngalo naliphi na ixesha naphi na, inkonzo epheleleyo kweli xesha litsha, ngokubanzi, abathengi abaphezulu bokufezekiswa kolawulo lwe "zero inventri" ukwenza igalelo labo, ngaloo ndlela kuphuculwa Ulawulo loshishino, ulawulo lwemveliso, ulawulo lokuthenga nokucwangciswa kolawulo lokugcina kunye nokubonelela kunokunceda ukunciphisa iindleko zokusebenza.
Ukubonelela abathengi ngenkonzo elungileyo kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu.
Imizamo, eyakhayo, ephezulu, yokuzinqwenela, ukusebenzisana ngokuphumelela.
Ukususela ekuqaleni kophando lwakho, wonke umsebenzi weqela lethu ebesebenza nzima ukukunika iimveliso ezilungileyo. Ukusuka ekubuzeni, ikowuti, iodolo, imveliso, ulawulo lomgangatho, ukupakisha, ukuhambisa kunye nokuhanjiswa kokugqibela, lonke ikhonkco libambe ngononophelo.
Inkampani izinikele kuyilo kunye nasekwenzeni zonke iintlobo zeelebheli eziphakathi neziphezulu (kubandakanya iilebheli zokulwa nomgunyathi), amakhadi okuchonga (kubandakanya amakhadi e-blister), iibhokisi zombala, iibhokisi zezinto ezinoqweqwe oluqinileyo kunye neebhegi. Ukuqinisekisa ukuba ixesha lifanelekile, lichanekile kwaye likhuselekile kunikezelo lwempahla kubathengi, inkampani ityale imali eninzi kwiitalente nakwizixhobo (ukuzisa umbala omtsha we-6 ojikelezayo we-UV offset kunye neseti epheleleyo yezixhobo zebhokisi yesipho), egxile kuphando lwenkqubo kunye nophuhliso, ukuveliswa kweSeiko, ulawulo lomgangatho kuyo yonke inkqubo, yokwandisa inkqubo yolawulo lwemveli kunye nenkqubo yokuvelisa.
Singumatshini wokushicilela opakishwayo kunye nokupakisha. Besisenza kolu shishino ngaphezulu kweminyaka engama-20. Unokukholelwa ngokupheleleyo ukuba amandla ethu kunye namava oshishino aya kusinceda ukusombulula nayiphi na ingxaki onayo malunga neemveliso zethu. Ukuba unomdla kwiimveliso zethu, nceda ukhululeke ukusithumelela nayiphi na imibuzo malunga neemveliso zethu. Siza kukuphendula ngokukhawuleza okukhulu. Sijonge ukusebenza nawe.